Wax-soo-saare sare oo uumi-bixiye ah oo loogu talagalay Qaboojiyaha Warshadaha / Nidaamka silsiladda Qabow / Nidaamka HAVC - Shanghai Yubing Equipment Co., Ltd.
Kumbiyuutarrada Uumiga ah
Xirmooyinka Wareegtada Xiran - Kahor-socodka
Towrarka Qaboojinta Loop xiran - Isku-socodka
Towers Qaboojinta Qabsatay - Nooca Lugood
Towers Qaboojinta Qabsatay - Nooca dhalada wareega
Dhismooyinka Warshadaha Qaboojinta ee Soosaarka Awoodda
Daaweynta Biyaha RO
Dib-u-warshadaynta Biyaha Qashinka
Waxtarka karti-u-helka sarreeya ee Qaboojiyaha Warshadaha / Nidaamka Chain Qabow / Nidaamka HAVC
ZICE taxanaha uumiga uumiyaha waa nooc ka mid ah qalabka isweydaarsiga kuleylka oo hufan oo dib loo cusbooneysiiyay laguna sameeyay iyadoo lagu saleynayo helitaanka tikniyoolajiyadda ugu sarreysa kuleylka adduunka oo dhan.
Isku-uruuriyaha uumiga wuxuu u adeegsadaa biyo iyo hawo sidii wax qaboojiye ah oo gaasaska qaboojiyaha ka beddelaya gaaska illaa xaaladda dareeraha. Uumiga la isku uruursanayo waxaa lagu dhex wareejiyaa isku-uruurinta isku-uruurinta, kaas oo had iyo jeer dibedda looga qoynayo nidaamka biyaha ee dib-u-wareegaya. Hawada ayaa isku mar korka looga afuufayaa gariiradda, taas oo keeneysa in yar oo ka mid ah biyaha dib loogu wareejiyay inay uumi baxaan. Uumi-baxaani wuxuu ka saarayaa kuleylka kuleylka, qaboojinta iyo uumiga uumiga ku jira gariiradda.
Mashiinadani waxay si gaar ah ugu habboon yihiin qaboojiyaha warshadaha iyo geeddi-socodka silsiladda qabow, iyagoo hubinaya kalsoonida, waxtarka sarreeya iyo kharashyada hawlgalka oo hooseeya. Haamaha uumiga uumiga waxay u leeyihiin faa iidooyinkan soo socda:
Naqshad ku habboon Maintenance:
Albaabka laga soo galo ee xad-dhaafka ahi wuxuu si fudud marin ugu helayaa qaybta gudaha ee kormeerka iyo dayactirka maalin kasta.
Kormeerka iyo Dayactirka oo aan Laheyn Waqti Go'an:
Kubbadda iyo shaandhada wasakhda ah waa la kormeeri karaa lana hagaajin karaa iyada oo aan la joojin hawlgalka qalabka. Hawada iyo biyaha awgood dariiqa is barbar socda awgood, waxay kaloo awood u leedahay inay kormeerto oo ay dayactirto aaladaha iyo gariiradda inta ay socoto howsha.
Waxqabadka Nidaamka ugu sarreeya ee leh Qiimaha Howlgalka Ugu Yar:
Tiknoolajiyada socodka isku dhafan waxay kordhisaa waxtarka: nidaamka hoose ee heerkulka iskuleynaya taas oo yareyneysa hooras koronto, oo ilaaliya ilaa 15% tamar marka la barbar dhigo nidaamyada hawo qabow ee soo jireenka ah.
Xulasho Xaddidan oo Aad u Sareysa ee Codsiyada Waaweyn:
Wadarta qiimaha ugu hooseeya ee lahaanshaha, qiimaha rakibida ugu hooseeya, iyo qaabeynta ugufiican ee lagu badinayo booska iyadoo la isku darayo hawo dhaqameedka, munaaradda qaboojinta, bamka biyaha ee wareega, basaska iyo tubooyinka isku xiran.
ZICE uumiga uumiga bixiya wuxuu keenaa waxqabad hufan oo fudud si loo ilaaliyo halbeegga sababtoo ah tikniyoolajiyadda patentka waxay yareyneysaa qarashka qaboojiyaha, isku xirnaanta iyo culeyska qalabka, iska ilaali khatarta baaxadda leh laakiin dhanka kale marin u helka dayactirka, dabacsanaanta iyo adeeg u rakibaadda ayaa la kordhiyay waana sababta loogu yeeray nooca awoodda ugu badan.
NIDAAMKA TALLAABADA QALIN JABINTA
Maaddaama qalabkaaga qaboojinta warshadaha iyo la-xiriirka la xiriira xallinta daaweynta biyaha, aan fahamsanahay in adeegyada ka-dambeeya ee wax-ka-qabashada iyo kalsoonida leh ay adiga muhiim kuu yihiin, waan kula shaqeyn doonnaa inta lagu jiro wareegga nolosha ee dhirtaada iyo qalabkaaga si loo hubiyo ganacsi waara. guul.
Qolka 392, Maya. 698, Lane 1588, Wadada Zhuguang, Shanghai, Shiinaha
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, hubi inaad farriimaha uga tagto wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan nidaamka munaaradda qaboojinta iyo xalalka daaweynta biyaha.